Fomba tsara indrindra ahazoana Adobe PDF maimaim-poana sy ara-dalàna
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe PDF maimaim-poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-22, Malagasy Blog
Lisansa: Version Trial
Mifanaraka: Mac / Mandresy
Adobe PDF maimaim-poana dia rindrambaiko mahazatra iraisampirenena hijerena, hanasoniavana ary hanehoan-kevitra amin'ny antontan-taratasy PDF. Azonao atao ny manadino ireo antontan-taratasy misy antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny Adobe PDF, izay iray amin'ireo programa tsara indrindra hiasa miaraka amin'ireo rakitra PDF.
Tombontsoa maimaimpoana ho an'ny Adobe PDF
Malalaka ny fampiasana Adobe PDF
Azonao atao ny miaro ny fiarovana ny angon-drakitrao manokana
Mora ny mamindra antontan-taratasy sy data eo anelanelan'ny sehatra samihafa
Tsotra ny fampiasana Adobe PDF
Ny endri-tsarimihetsika, ny fanaingoana ary ny fanaovana zooming dia tsara indrindra
Ny fametrahana sary NVIDIA haingana dia mamela ny mpampiasa hiova haingana eo anelanelan'ny pejy
Ireo matihanina mpandraharaha samihafa dia afaka mahita fampiasana ao amin'ny Adobe PDF
Inona ny Adobe PDF?
Adobe PDF free reader no rindrambaiko izay ampiasaina hatraiza hatraiza erak'izao tontolo izao hijerena, hanasoniavana, hizarana, hanonta ary hanamarihana ireo rakitra PDF. Tsy manam-paharoa izy satria io no programa tokana amin'ny karazany izay mamela ny mpampiasa hiasa miaraka amin'ny atiny rehetra hitanao ao anaty rakitra an'io endrika io. Satria mifandray amin'ny serivisy rahona omen'ny Adobe izy io, midika izany fa afaka miasa amin'ny rakitrao ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Maimaimpoana ve ny Adobe PDF?
Eny, maimaimpoana tanteraka ity programa ity, azonao atao ny misintona mpamaky PDF avy amin'ny Adobe ao amin'ny tranonkalany, mitady fotsiny ilay kisary mifanaraka aminy.
Nahoana aho no tokony hieritreritra ny hifindra any amin'ny Adobe PDF voaloa?
Amin'ny fividianana ny fisoratana anarana Adobe PDF, dia mahazo fidirana amin'ireo endri-javatra fanampiny toy ny fanovana rakitra PDF ho rakitra Microsoft Word, Excel, PowerPoint na RTF azonao atao ny manamboatra, mampifangaro rakitra maromaro ho iray ary mahazo tahiry rahona misimisy kokoa.
Misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ve rehefa mividy Adobe PDF?
Raha mpianatra mpampianatra ianao dia afaka mahazo 60% amin'ny fampiharana Creative Cloud rehetra, ao anatin'izany ny Adobe PDF.
Fanapahan-karena ho an'ny mpianatra
Afaka mampiasa Adobe PDF maimaimpoana amin'ny finday avo lenta ve aho?
Eny, azonao atao. Manararaotra ny Adobe Reader maimaim-poana DOWNLOAD, mandehana amin'ny pejy iray ao amin'ny Google Play na iTunes App Store.
Ny vokatry ny fampiasana ny pirated Version
Mpampiasa maro no manandrana mahita kinova fampiharana voajirika nefa tsy tsapany akory hoe firy ireo loza miafina mety hanaraka azy ireo aorian'ny tsindrio "Download".
Mety hampidi-doza ny fampiharana diso na ratsy
Ity no olana mahazatra indrindra sy kely indrindra azonao. Hisintona ny fampiharana tsy tianao fotsiny ianao (miaraka amin'ny “bonus” doka) na iray izay tsy mandeha.
Raha mitady tolotra tsara amin'ny fampiharana mahafinaritra ianao dia zahao ny misy Fihenam-bidy Adobe Creative Cloud.
Afaka mahazo viriosy ianao
Ankoatry ny viriosy, rehefa manandrana maka ilay Adobe PDF voajirika ianao dia mety hahita olana isan-karazany na dia amin'ny dingana fampidinana aza. Mety mila mandefa SMS ianao na mandoa vola amin'ny famandrihana na misintona, mandalo sora-baventy mipoitra taonina sns ... Rehefa nametraka ilay rindrambaiko tamin'ny PC ianao dia ho voan'ny virus izay hampihena ny asany tokoa .
Jereo hoe ahoana no ahafahanao misintona Maimaimpoana ny Adobe Creative Cloud.
Ny vokatra tsara dia mila fanohanana
Raha nisy nijirika i Adobe PDF dia tsy hisy fanavaozana ho hita. Ireo mpanamboatra dia manohana sy manatsara ny vokariny raha tsy manam-bola hanaovana izany. Betsaka ny mpampiasa no tsy mahatakatra izany, na izany aza, ny fampiroboroboana ny vokatra nomerika dia asa mafy izay ahatafiditra olona marobe, izay te-hahazo vola amin'ny asa ataony.
Solosaina maimaim-poana amin'ny Adobe PDF
Raha misy ny antony tsy ahafahanao miasa miaraka amin'ny Adobe PDF na te hanandrana programa hafa ianao dia ity misy lisitry ny safidy hafa azonao ampiasaina hiasa amin'ny rakitra PDF.
Mampiasà FOXIT MAIMAIMPOANA
Tsy miasa amin'ireo PDF misy sary mihetsika Flash
Tsy misy fanekena lahatsoratra optika
Mety hametraka fitaovana tsy ilaina amin'ny PC-nao
Foxit Reader dia mpamaky PDF mifototra amin'ny rahona, mamela anao hiara-miasa amin'ny rakitra PDF miaraka amin'ireo mpampiasa hafa. Ny PDF dia azo foronina amin'ny fomba isan-karazany (avy amin'ny scan, amin'ny alàlan'ny fanovana avy amin'ny rakitra DOCX, PPT na XLSX, amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo rakitra maromaro ho iray, sns.).
Ankoatra ny fiaraha-miasa dia ho afaka hanara-maso ny tantaran'ny fisieo ianao, hijery ny olona rehetra, izay manokatra azy ireo, ary mandefa fampandrenesana ho an'izay mamaky ilay rakitra.
Ary farany, raha miahiahy momba ny fitazonana ny fisieanao tsy hanana ahiahy ianao na matetika miasa miaraka amina tahirin-kevitra mora tohina, Foxit Reader dia manome fomba fiarovana isan-karazany, miainga amin'ny teny miafara ka hatramin'ny rakitra encryption.
Mampiasà MAIMAIMPOANA NITRO
Mora ampiasaina ary marina
Fanovana lahatsoratra, sary ary pejy
eSigning fitaovana natambatra
UI mitovy amin'ny MS Office
Fanohanana endrika fisie mahavariana
Ny kinova biraon'ny Nitro Pro dia miasa ho mpamaky Windows PDF ihany
Raha mitady programa mora ampiasaina ianao, manana UI mora vina ary endri-javatra mandroso maro, dia tokony ho iray amin'ireo safidinao ambony indrindra ny Nitro Reader. Miaraka amin'ny fanampiany, afaka mamorona, mizara ary miaro ireo PDF-nao ianao. Azonao atao ny manamboatra mora foana ny fisie rehetra miaraka amin'ny loko, endritsoratra ary ny endriny samihafa.
Azonao atao ny miasa amina antontan-taratasy tokana miaraka amin'ny ekipanao, manana ny safidy hanome sosokevitra fanovana, hanomezana ary hanomezana valin-kevitra rehetra. Ny fiarovana dia azo atao amin'ny alàlan'ny tenimiafinao. Ireo rakitra noforoninao tamin'ity programa ity dia azo sokafana amin'ny mpamaky PDF rehetra.
Fantaro bebe kokoa momba ny fanokafana sy fanovana a Fisie PDF.
Ny GIF sarimiaina dia azo averina mora foana
Preview ny playback izay very
Tsy azo atao ny manova PDF voageja raha tsy misy ny rakitra am-boalohany
Ny ISO-Standardized PDF dia tsy tohanana
Mety hamafa PDF tsy ampoizina
Preview dia miaraka amin'ny solosaina Mac rehetra fa tsy tokony hamitaka anao hieritreritra fa tsy manana fahaiza-manao izy io. Izy io dia manana izay rehetra ilain'ny mpamaky PDF, ao anatin'izany ny mety hanisy anotasy, hanakambana rakitra marobe ho iray, hiasa amin'ny endrika isan-karazany, ary hiaro ireo rakitrao amin'ny teny miafinao. Safidy tsara ho an'ny fampiasana matihanina sy manokana.
Mampiasà PDFPEN MAIMAIMPOANA
Endrika fanondranana marobe
Tsy dia mangarahara ny fisafidianana fitaovana sy sary masina
Safidy hafa maimaim-poana Adobe PDF maimaimpoana ho an'ny macOS 10.14 miaraka amina endrika ho an'ny famolavolana sy fizarana PDF. Ny programa dia ahafahanao mamorona endrika sy tabilao atiny, manampy sary, mampiasa sonia elektronika ary manondrana ireo rakitrao amina endrika hafa.
Vao tsy ela akory izay ireo mpandraharaha dia nanampy ny fampisehoana an-tsoratra izay manome ny mpampiasa fahafaha-maneho hevitra momba ny fisie sy manisy marika azy ireo nefa tsy manova ny angon-drakitra. Ankoatr'izay dia miharo amin'ny rindrambaiko OCR tsara indrindra.
Mety ho liana amin'ny fomba fanokafana sy fanovana a ianao Fisie JPEG.
Mampiasà XCHANGE MAIMAIMPOANA
Azonao atao ny manova rakitra PDF mora foana
Mora ny manampy lohateny sy tsanganana an-tsoratra
Miasa haingana nefa tsy tara
Safidy fanamboarana vitsivitsy
Tsy afaka manondrana pejy mitokana
Sarotra ny fanovana habe
PDF-XChange Editor dia soloina Adobe PDF Reader azo antoka. Mamela anao hamolavola sy hijerena rakitra, manampy audio, manasongadina ary manafatra an-tsoratra, ary maro hafa. Ny endrika tsara indrindra ananan'ity mpamaky ity dia ny fitaovana ahafahanao mamantatra lahatsoratra amin'ny scan ary mamela anao hikaroka lahatsoratra ao anaty antontan-taratasy.
Sintomy ny Adobe PDF Free
Sintomy ny Adobe PDF ho an'ny Win and Mac
Rehefa mampiasa rindrambaiko manana fahazoan-dàlana ianao dia misoroka ny olana rehetra mifandraika amin'ny viriosy ary mahazo programa avo lenta izay miasa tsy misy lagy sy lozam-pifamoivoizana.
Tombontsoa Adobe PDF
Sintomy ny Adobe PDF maimaim-poana
Ahoana ny Fomba Ahazoana Maimaim-Poana ny Lightroom
Photoshop Express -Tserasera
Acrobat Pro DC Maimaimpoana
Adobe Spark Maimaim-Poana
Ahoana Ny Fomba Ahazoana Photoshop CS6 Maimaim-Poana
Rindrambaiko Adobe Maimaim-Poana an'ny 2022